10 Ny ankamaroan'ny kianja golf scenic any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Ny ankamaroan'ny kianja golf scenic any Eropa
Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel UK, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 20/08/2021)
Lohasaha sy havoana maitso maitso, ahitra midadasika, amin'ireo toerana tsara tarehy indrindra any Eropa, ireo 10 ankamaroan'ny lalao golf mahafinaritra any Eropa, dia ny sasany amin'ireo klioba golf ambony eto an-tany. Ny golf rehetra dia natao ho tonga lafatra, fitambarana fampitaovana mahafinaritra sy hatsarana voajanahary.
1. Golf Blue Green Pleneuf-Val-Andre any Brittany
Miaraka amin'ny fahitana mahafinaritra ny anglisy Channel, ny golf Bluegreen Pleneuf Val Andre dia mahavariana. Ny golf golf Bluegreen any Brittany dia iray amin'ireo lalao golf tsara tarehy any Eropa.
Ny masonkarena maitso mavana dia tsy mijery ny morontsirak'i Breton, ary ny fampifangaroana ny tany maitso amin'ny ranomasina manga dia mahatalanjona. Ankoatry ny, hilalao amin'ny iray amin'ireo ianao 500 taranja golf tsara indrindra eto an-tany.
2. Ny fampianarana vaovao Skandinavianina: Copenhagen
25 km avy any Copenhagen, ny golf course New Cour dia mitana ny laharana 50 taranja golf ambony any Eropa isan-taona. Ny New course 36-hole dia iray amin'ireo lalao golf mahafinaritra eto Eropa 25 ala hektara manodidina azy.
Rano mankany amin'ny dobo voajanahary, milamina sary mahafinaritra, ary klioba golf hazo nahazo loka, hahagaga anao hatramin'ny vavahady mankamin'ny lavaka voalohany. Tena tsara tarehy ny tontolo ary nahasarika mpilalao golf maro manerantany.
Hamburg mankany Copenhagen miaraka amina lamasinina
Zurich mankany Hamburg miaraka amina lamasinina
Rotterdam mankany Hamburg miaraka amina lamasinina
Rivotra avy amin'ny ranomasina, voninkazodia, ary ny fomba fijerin'ny eposy Isle of Man, Ny filalaovana golf any amin'ny kianja filalaovana golf any Castletown dia traikefa tsy hay hadinoina. Ny Nosy Man dia iray amin'ireo toerana mahavariana indrindra any Eropa, ary ny lalao golf dia iray amin'ireo lalao golf tsara tarehy indrindra any Eropa.
Manodidina anao ny ranomasina 3 lafiny, rehefa milalao ilay hazakazaka eo amin'ny saikinosy Langness tsara tarehy ianao. Ny morontsiraka feno morontsiraka, filentehan'ny masoandro be voninahitra, laharana faha-8 i Castletown Golf Links amin'ireo lalao golf mahavariana indrindra any Angletera sy Irlandy. Ny lavaka faha-17 dia tsy mijery ny Ranomasina Irlanda, ary ny fijery avy amin'ny lavaka faha-18, ny St. manan-tantara. Michaels Isle, 12trano fiangonana tamin'ny taonjato faha-20, fomba fijery mety hanelingelina ny mpilalao golf efa za-draharaha.
4. Tralee Golf Club: Irlandy
Napetraka amin'ny tany voajanahary, tazana ny Oseana Atlantika sy ny morontsiraka, ny Tralee golf golf any Irlandy dia iray amin'ireo golf tsy manam-paharoa sy mahafinaritra indrindra any Eropa. Hanenjika lavaka manerana ny havoana maitso ianao miaraka amin'ny fahitana manga lalina eo alohanao.
Ity golf golf 18-hole ity dia any County Kerry, trano fonenan'i Dingle Peninsula, ary i Killarney tsara tarehy valan-javaboary. Ny golf dia napetraka eo amin'ny sisin'ny morontsiraka mahavariana, miaraka amin'i Moorland maitso sy Irlanda Andrefana Andrefana.
5. Golf Club Crans-Sur-Sierre: Soisa
Iray amin'ireo tranainy indrindra, nefa maoderina sy fitaovana, taranja golf any Eropa, ny kianja golf Crans-sur-Sierre any Suisse dia iray amin'ireo klioba golf tsara tarehy indrindra any Eropa. Dobo voajanahary, tendrombohitra, ary ny lohasaha Soisa maitso maitso dia mahavariana sy manaitaitra.
Ity taranja golf mahafinaritra ity dia any amin'ny Alpes Soisa, koa mahatalanjona ny toerana. Miaraka amin'ny fahitana an'i Mont Blanc sy Matterhorn, ny tendrombohitra avo indrindra sy tsara tarehy any Eropa, tsy maintsy gaga ianao amin'ity taranja golf ity. Crans-sur-Sierre golf dia a dia tsara tarehy niala Geneva, sy Bern.
6. Ny kianja filalaovana golf indrindra eto Irlandy: Rohy Golf Old Head
Mipetraka eo an-tampon'ny Old Head Kinsale, voahodidin'ny ranomasina, manolotra ny lalao golf Kinsale fomba fijery mahafinaritra, ny fomba fijery kanto indrindra eran'i Irlanda sy Angletera.
Miaraka amin'ny kijana maitso, tany mikitoantoana, sy ny fahitana an-dranomasina, ny tontolon'ny Irlandy malaza dia tsy mitsahatra ny gaga. Noho izany, ho gaga ianao amin'ireo kianja mahavariana ao amin'ny taranja golf Old Head Kinsale. Milalao golf ianao amin'ny a 350 vato vato sandaly antitra, miova avaratra mandritra ny fotoana. Ity kianja golf ity dia ao amin'ny faritanin'i Cork, miaraka amin'ny sambo, fanjonoana, scuba diving, sy ny maro hafa hetsika ivelan'ny trano ho an'ireo mpankafy rano amin'ity seranana azo antoka ity.
7. Ny lalao golf indrindra: Passier Golf Club Meran South Tyrol
Fijery panoramika amin'ireo tendrombohitra mahafinaritra eto Eropa, Ny klioban'ny golf Passier any Meran dia manolotra traikefa tsy hay hadinoina ho an'ireo mpilalao golf mandroso. Ary, miaraka amin'ny velaran-tany Tyrol atsimo, dobo, efitra ambanin'ny tany, sy havoana maitso, ny klioban'ny Passier golf dia manana toerana sy endrika mahavariana.
koa, ny taranja golf 18 ny lavaka dia miparitaka amin'ny tany terrain, sy kijana maitso, manintona mpilalao golf manerana an'izao tontolo izao mandritra ny faran'ny herinandro golf, na fitsangatsanganana lavitra amin'ny natiora Tyrolian.
Trento mankany Bolzano miaraka amina lamasinina
Milan mankany Bolzano miaraka amina lamasinina
Bologna mankany Bolzano miaraka amina lamasinina
Venise mankany Bolzano miaraka amina lamasinina
8. Golf Eichenheim: Aotrisy
Eo afovoan'ny ala Alpine matevina, kabine hazo manodidina, sy kijana, ny golf Eichenheim dia iray amin'ireo golf tsara tarehy indrindra any Eropa. Ny rivotra alpine vaovao, fofona natiora, ary ny famirapiratana voajanahary dia nanentana ireo mpilalao golf tsara indrindra eto an-tany. Ny golf golf Eichenheim dia manana 18 lavaka, miparitaka mihoatra ny 6000 metatra.
Ity golf golf mahafinaritra ity dia iray amin'ireo klioba golf tsara indrindra any Aostralia, miaraka amin'ny kojakoja avo lenta: Sauna, dobo anatiny sy ivelany mba hiala sasatra aorian'ny fifaninanana golf mahafinaritra. Tsy misy toa ny tontolon'ny alpine miaraka amin'ny fepetra faran'izay tsara hampihatra ny fitiavanao.
9. Gardagolf Country Club: Italia
From Manerba-Fort of the palace of Soianoto the hills of Polpenazze and castle, the Gardagolf Club offers scenic views of olive trees and Lake Garda. Ny Mazava ho azy fa ny Gardagolf 27 lavaka, niparitaka 110 hektara, ao amin'ny faritra Lombardy manaitra.
Ity kianja golf mahafinaritra ity dia voahodidin'ny havoan'i Valtenesi, manome fomba fijery mahafaly sy manintona an'ireo mpilalao golf mandroso sy matotra indrindra. Ny Mazava ho azy dia ny làlana tsara tarehy indrindra any Gardagolf, misy voninkazo sy hazo lava manodidina.
Trento mankany amin'ny Lake Garda Peschiera miaraka amina lamasinina
Bolzano Bozen mankany amin'ny Lake Garda Peschiera Miaraka amina lamasinina
Bologna mankany amin'ny Lake Garda Peschiera Miaraka amina lamasinina
Venise mankany amin'ny Lake Garda Peschiera miaraka amina lamasinina
10. Kianja Golf Andermatt: Soisa
Peroa soisa hafa, ny golf golf Andermatt dia manidy ny antsika 10 ny ankamaroan'ny lalao golf tsara tarehy any Eropa. Ny kianja golf Andermatt dia eo amin'ny lohasaha soisa kanto. Tendrombohitra manoroka ny lanitra, havoana maitso mavana, ary faritra sahala amin'ny karatra paositra.
Tena mahavariana tokoa ny toerana, fa na ny mpilalao mifantoka indrindra aza dia mety ho voataonan'ilay lohasaha Ursern tsara tarehy. Ny golf golf Andermatt dia novolavolaina tsara mba ho lasa natiora ary tia namana. Ho hitanao ny rano mikoriana sy ny kijana voninkazo tafiditra ao anaty kianja golf. Misy 18 lavaka hisafidianana. Ankoatry ny, ny rivotra mahery any an-tendrombohitra dia mametraka fanamby ho an'ny mpilalao golf mazoto, hampiakatra ny lalao.
Bern dia nifangaro tamin'ny lamasinina
Lucerne hiaraka amin'ny lamasinina
Zurich hifangaro amin'ny lamasinina
Izahay ao Save A Train dia ho faly hanampy anao handamina fitsangatsanganana indray mandeha any amin'ireo 10 ankamaroan'ny golf tsara tarehy any Eropa amin'ny lamasinina.
Te hampiditra ny bilaoginay “1o ankamaroan'ny kianja golf scenic in Europe” ve ianao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-scenic-golf-courses-europe%2F%3Flang%3Dmg< - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)